eNasha.com - भुवन र भ्यालेन्टाइन
भुवन र भ्यालेन्टाइन
"केटीको उमेर र केटाको कमाइ कहिल्यै नसोध्नू !" यो मान्यतालाई अभिनेता भुवन केसी यसरी सच्याउँछन्, "केटाको पनि उमेर नसोध्नू ।" उनी आफ्नो कमाइलाई र्छलङ्ग पारिदिन तयार छन् तर उमेरबारे मुख खोल्न चाहन्नन् । उमेर सोधिहालेमा रेडिमेड जवाफ पस्कने गर्छन्, "तपाईलाई जति लाग्छ त्यति नै ।"
चलचित्र साइनो को सुटिङमा डेनीले उनलाई भनेका थिए रे, "यु आर टु गुड !" उनले अभिनय गरेर मात्र ताली पाएका छैनन् । उनको पुरुष व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्दै चलचित्र समीक्षक डा. प्रदीप भट्टराई भन्छन्, "म भुवनलाई सबैमा विश्वास गर्नसक्छु तर उनले ८० वर्ष नकाटेसम्म आइमाईको सवालमा विश्वास गर्दिन ।"
बासबारीस्थित आफ्नो वासस्थानको दिशा मोबाइलबाट बताउने क्रममा नेका (प्रजातान्त्रिक)को कार्यालय नजिकको घरको बार्दलीमा उनी कमिज बिना प्रकट भए । त्यो हुलियामा उनको 'प्लेब्वाई' छवि चम्किरहेको थियो । उनी उमेरभन्दा जवान देखिएका थिए ।
आफूलाई मान्छेहरूले 'प्लेब्वाई'को रूपमा चित्रण गर्नेगरेको उनलाई थाहा छ । यसलाई लिएर उनी न दुखी छन् न खुसी । तैपनि अरुको चासो बन्न सकेकोमा गर्वान्वित उनको कथन छ, "लोकप्रियहरू नै बढी विवादमा पर्ने हुन् । जस्तै, गिरिजा, प्रचण्ड र माधवकुमार ।"
भुवन केसीलाई 'प्लेब्वाई'को विशेषण दिँदा 'प्लेब्वाई' शब्दकै अपमान हुने उनको तर्क छ । यद्यपि आफ्नो केटी साथी प्रशस्त रहेको उनी लुकाउँदैनन् । केटी साथी भन्नाले गर्ल फ्रेण्ड हुन् कि - भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, "होइन केटी साथी नै, गर्ल फ्रेण्ड भन्यो भने मान्छेले प्रेमिका बुझ्लान् ।" तिनै साथीहरूसँग कहिलेकाही हिँडेको, खाएको र कुरा गरेको देखेर नै "भुवन केटी फेरीफेरी हिँड्दारहेछन्" भन्ने हल्ला फैलिएको उनको ठहर छ ।
'पब्लिक फिगर'हरूको सानो मुद्दालाई विशाल बनाइदिने चलन रहेसम्म आफू पत्रिकाको खुराक बनिरहने अनुमान उनी गर्छन् । बिल क्लिन्टन र डायनाका जेजस्ता किस्साहरू सार्वजनिक भए, तिनलाई उनी ठूलो मान्दैनन् । भन्छन्, "साधारण मान्छेको जीवनमा त्यस्ता घटना कति हुन्छन् कति ।"
पुरुष होस् या नारी, आफूसँग बोल्न आउनेसँग हार्दिकताका साथ कुरा गर्ने बानी उनको छ रे । त्यही भएर आफ्नो केटा र केटी साथीहरू बराबर रहेको उनी बताउ“छन् । के मिलनसार हुनु अवगुण हो र ? उनको प्रश्न छ ।
तर, हरेक नारीसँगको आफ्नो सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न नसकेको उनी खुलाउँछन् । "म कसैलाई पछ्याउँदिनँ । कसैले निम्तो दिएमा मात्र भेट्न जाने बानी छ," उनी भन्छन्, "मेरो सम्बन्ध नतन्किनुको कारण यही होला ।" तर, आफूले अहिलेसम्म कुनै केटी साथीको मन नदुखाएको प्रष्ट पार्छन् उनी ।
मान्छेको ढुकढुकी चलिरहेसम्म प्रेम चलिरहन्छ भन्न चाहन्छन् उनी । प्रेम बारम्बार हुन्छ । माया कुनै पनि बेला जोसँग पनि गाँसिन सक्छ । अझ किटान गर्छन्, "बिहे भयो भन्दैमा अर्को स्त्रीसँग प्रेम हुँदैन भन्ने होइन, हुन्छ । फरक यति हो कसैले व्यक्त गर्छ कसैले गर्दैन ।" आफ्नो बारेमा समेत उनी निश्चित छैनन् । उनको विचारमा भविष्यको कुनै भर हुँदैन ।
मौलाउँदै वा झाँगिदै जाने प्रेममाथि उनलाई विश्वास छैन । बरु एकै नजरमा बस्ने मायालाई उनी प्रेम ठान्छन् । रूप, जात, शिक्षा, बोलीचाली, धन र कुमारीत्व जस्ता मापदण्डहरूमा उत्तिर्ण भएपछि मात्र कसैलाई 'आई लभ यु' भन्ने मानसिकता उनलाई मन पर्दैन । भन्छन्, "मलाई त यी सबै मापदण्डमा फेल भएपनि कुनै युवतीलाई मनले खायो भने पुग्छ । यदि मनले खाएन भने ३२ लक्षण भएपनि मलाई त्यो केटी चाहिँदैन ।"
उनलाई सबैभन्दा पहिले युवतीको हेराइले आकर्षित गर्छ रे । तर, नारी मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमताको कमी आफूमा रहेको महसुस उनलाई हुन्छ । यसबारे उनको भनाइ छ, "भगवानले नसकेको काम मैले कहाँ सक्छु र !"
एकपटक बोल्ने युवतीहरूले आफूलाई सधैं सम्झिरहेको उनले पाएका छन् । तर, आफूमा भगवान कृष्णको कुनै गुण नभएको उनी बताउँछन् । न त उनी मान्छेले सोचेजस्तो कन्या राशीकै हुन् । उनको राशी तुला हो रे ।
बिहे नै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने गरी उनले चिताएको पहिलो युवती विजया थिइन् । यति ट्राभल्स्को जागीरे जीवनमा भेटेकी विजया उनकी पत्नी नै भइन् । तर, त्यो सम्बन्ध लामो समय अगाडि बढेन । जीवनभर कुटाकुट गरेर बाँच्नुभन्दा अलग्गिनु ठीक हो भन्ने मान्यता उनको छ ।
अहिले उनी सुष्मितासँग छन् । विजयाजस्तै सुष्मितामा उनले गजबको व्यक्तित्व र शैली देखेका थिए । त्यहीभएर उनले सुष्मितालाई जीवनसाथी बनाए । तर, उनको दोस्रो सम्बन्ध पनि एकपटक धरमराउँदो अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिखेर आफू साह्रै तनावमा रहेको उनी सम्झन्छन् । पछि सम्बन्ध सुध्रिएपछि उनले राहत पाए । हिजोआज उनी कहिलेकाही पहिलो पत्नी विजयाको सम्झनामा लीन हुन्छन् ।
"बिहे गर्दा पुरुष र महिलाले आइन्दा परस्त्री वा परपुरुषमाथि आँखा लगाउँदैनौँ भनेर बाचा गरेका हुन्छन् । त्यस्तो बाचा व्यवहारमा लागू हुनसके जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ" भुवन भन्छन्, "तर अचानक कसैलाई घरबाहिरको मान्छे मन पर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा समाजको होइन कि आफ्नो खुसी हेरेर निर्णय लिनुपर्छ ।" यद्यपि एकैपटक दुइ जनाभन्दा एकपटकमा एक जनासँगको वैवाहिक जीवन समय अनुकूल हुने उनको अनुभव छ ।
बिहे बाहिरको सेक्सबारे उनी संकुचित छैनन् । ऋषिमुनिहरूको मन बहकिएजस्तै कुनै पुरुष वा नारीको मन बहकिनसक्ने बताउँदै भुवन भन्छन्, "आफ्नो परिवारमा असर पर्दैन वा असर परेमा सहन सकिन्छ भने र सम्बन्ध राखिने व्यक्तिलाई हानी हुँदैन भने बिहेबाहिरको सेक्स अपराध होइन ।"
सेलेब्रिटी अभिनेता सेक्स हल्ला रिलिज प्रविधि समारोह सुटिङ पेज थ्री अभिनेत्री